Ajụjụ na nyocha nke Ndeke Luka Yakongo Ịgba ọsọ nke akụkọ ahụ: gịnị ka Lamuka meriri n'ọtụtụ nnọkọ DRC, ya jupụtara? Mgbe nzuko ahụ gasịrị, ànyị ga-agbazi ma ọ bụ gbanwee ntuli aka ndị mba ụwa kwetara?
Site na: KongoLisolona: February 16, 2019 00: 20 Enweghị asịsa
Na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ihe niile bụ ntụgharị ọmụrụ nwa ma anyị chere na ndị isi Lamuka emeela atụmatụ ọdịnihu ha na nke ndị otu ha. Ihe niile na - eme ugbu a na ike nke ike, nkwado nke ndị nnọchi anya mba, ịkwadebe mpaghara, ndị omeiwu na ntuli aka mpaghara.
Ọtụtụ ndị ndu Lamuka na Kinshasa ekwuola okwu maka ọchịchị dị ugbu a. Onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị kacha ochie ahọpụtara na DRC, Onye isi oche nke ugbu a na Mgbakọ Mba ahụ, Gabriel KYUNGU wa Kumwanza, emechilarị arụmụka ahụ. Ndị otu G7 na AR, ndị mepụtara otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ndị mmegide kachasị sie ike na mba ahụ, nọ n'ihe mgbagwoju anya nke nkwado ahụ nyere Martin Fayulu ma ọ bụ Onye isi ala Felix Tshisekedi, onye bụ otu onye isi ha.
Martin Fayulu na Butembo, mgbe President Felix Tshisekedi natara ndị nnọchianya na ndị nnọchianya kwadoro na Kinshasa. Akpa, ekwesiri iburu n'uche na ime ihe ike n'oge mmeghari nke ndi iro na-egosi na ha na-ebelata.
Butembo egosiputala na a na-ekewa ya n'ime otu na-ekwupụta onwe ha n'atụghị egwu, ebe ndị dị nwayọ jisiri ike kọwaa ịgbachi nkịtị. Ndị ọzọ bi na North Kivu nwere arụmụka ọhụụ iji jụ na Nande ga-abụ onye na-achị ógbè ka ọ ghara ime ka ógbè ahụ nwee mmegide siri ike. Esemokwu a nwere ike ịbụ ihe ziri ezi ma ọ bụrụ na Onye isi ala Felix Tshisekedi ya na Vital Kamerhe echefubeghị mkparị nke Wenezde nke ọnwa Disemba 12, 2018.
Ndi ka ha mara nke oma na ufodu ndi isi ha na ndi agbata obi ha kwadoro Felix Tshisekedi?
Ha mara n’ezie ihe Moses Katumbi chere n’usoro ọchịchị Félix Tshisekedi?
Ha mara na ụfọdụ ndị isi Nande bụ ụmụnne na ndị enyi nke onye isi ọrụ RRC onye isi ọrụ, Vital Kamerhe ??
Ha dị njikere ịkwalite ọchịchị nke North Kivu ma nwee ndị ozi na ọchịchị 10 na-abịa n'ihu?
Ha chefuru na ha chụrụ di na nwunye FatshVit na Beni ma manye ha ịkagbu nzukọ ha na Butembo na Nọvemba gara aga ??
Oge na-aga ngwa ngwa, a na-akụkwa ndozigharị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na isi obodo Congo, ebe na Butembo, ụfọdụ ndị ha na ndị isi ndọrọ ndọrọ ọchịchị ha na-alaghachi azụ ma na-etinye onwe ha n'ihe ize ndụ na-enweghị mbibi ọchịchị.
Ndeke Luka Yakongo. Ọsọ ozi
Ihe odide Afrika nke abụ Ed Sheeran: Africa na-acha ọkụ; ọ dịghị onye nwere ike ịkwụsị Africa ịmị ọkụ, ọbụnadị ndị akpọrọ gị ndị nwe obodo ... (VIDIO)
Ọkt20 11: 57